दोस्रो चरणमा कस कसको भाग्य चम्किएला ? को को सकिदैछन् ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
दोस्रो चरणमा कस कसको भाग्य चम्किएला ? को को सकिदैछन् ?
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको चुनाव नजिकिदै जाँदा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा चर्चा र चासोमा रहेको छ। ती मध्य केहीलाई हामीले यसमा समेट्ने खोजेका छौं। बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि ५ बजेसम्म हुने मतदाताले केही नेताहरुको राजनीतिक भविष्यको समेत निर्धारण गर्ने छ।दोस्रो चरणमा ४७ जिल्लाको प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय २८ र प्रदेशसभातर्फ २ सय ५६ स्थानमा लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लाको प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका लागि ७४ स्थानका लागि मंसिर १० मा मतदान भैसकेको छ।
सुरेन्द्र कार्की र विश्वप्रकाश शर्मा
राम कार्कीका नामले चिनिने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्र कार्की र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा दुवैले राष्ट्रिय राजनीतिमा वौद्धिक नेताको पहिचान बनाएका छन्। दुवै नेता चुनावी मैदानमा भएको कारण झापा-१ को प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक बनेको मात्रै छैन देशभर चासो समेत रहेको छ। संसदमा वैचारिक विषयमा बहस चलाउनका लागि दुवै नेता आवश्यक भएपनि आइतबार हुने चुनावमा एकले मात्रै त्यो अवसर पाउने छन्।
पहिलो संविधानसभा चुनावमा ताप्लेजुङबाट पराजित भएका कार्की दोस्रो संविधानसभामा भने समानुपातितर्फबाट सभासद बनेका थिए। उनले सुचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाली सकेका छन्।
विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका शर्मा पार्टीभित्रका सशक्त युवा नेताको रुपमा रहेका छन्। दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उनी सोही क्षेत्रबाट एमालेका नेता रविन कोइरालासँग पराजित भएका थिए। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको गठबन्धनका कार्की साझा उम्मेदवार हुन्।
राजेन्द्र लिङ्देन र कृष्णप्रसाद सिटौला
दुई विपरित सैद्धान्तिक धारको नेतृत्व गर्ने राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन र कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीचको प्रतिस्पर्धालाई धेरैको चासोको रुपमा रहेको छ। देशभर कांग्रेस र राप्रपाबीच चुनाव गठबन्धन भएपनि झापामा भने फरक समिकरण रहेको छ।
२०६२–०६३ को परिवर्तनपछि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा देश लैजान सक्रिय भूमिका खेलेका सिटौलाले त्यही विषयलाई प्रचार गर्दै चुनावीमा होमिएका छन्। लिङ्देन भने यसको ठिक विपरित ध्रुवमा रहेका छन्। राप्रपा ती परिवर्तनको विरोध गर्दै आएको छ । सो दल हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा उठाउँदै आएको छ ।
पहिलो संविधानसभा चुनावमा झापा १ बाट पराजित भएका सिटौला दोस्रोमा भने सोही क्षेत्रबाट विजयी भए। दोस्रो संविधानसभा चुनावमा सिटौलाको निकटमत प्रतिद्वन्द्वी लिङ्देन रहेका थिए। लिङदेनलाई वाम गठबन्धनले सघाएका कारण सिटौलाको अवस्था के हुने भन्ने निश्चित छैन ।
शिवकुमार मण्डल र अमृत अर्याल
हालका विना विभागीय मन्त्री रहेका नेकपा माओवादीका नेता शिवकुमार मण्डल र कांग्रेसका सांसद अमृत अर्यालको प्रतिस्पर्धालाई धेरैका लागि चासोका साथ हेरिएको छ। मण्डल, अर्याल र एमालेका जिल्ला अध्यक्ष विनोद ढकाललाई फरक दलका भएपनि एकै आत्मा भएका नेताहरुको जिल्लाहमा हेरिने गरिन्छ। ठेक्कापट्टादेखि सबै कारोबारमा तीनै नेताहरुको मिलेमतोमा हुने गरेको बताइने गरेको छ।
दोस्रो संविधानसभा मोरङ- ३ बाट सबैभन्दा कम मतान्तरमा चुनाव जित्दै मण्डलले संविधान निर्माणको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थिए भने मोरङ कांग्रेसका तत्कालिन सभापति अर्याल उपेन्द्र यादवलाई मोरङ–५ बाट हराएका थिए । अहिले मण्डल र अर्याल आमने सामने भएक छन् ।
लालबाबु पण्डित र शेखर कोइराला
राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक फरक प्रकारको पहिचान बनाएका कांग्रेसका शेखर कोइराला र एमालेका लालबाबु पण्डितबीचको प्रतिस्पर्धाको कारण यो क्षेत्र राष्ट्रिय चासो रहेको छ। कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य कोइरालाका लागि परिवारिक विरासतसँग सो क्षेत्र जोडिएको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा पण्डितले कमाएको ख्यातीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्ने सरकारी सेवामा प्रवेश नपाउने र भएकाहरुलाई समेत अनुमति वा जागिर छाड्नु पर्ने कानुन बनाएर पण्डितले फरक पहिचान बनाएका थिए।
कोइरालासँग जोडिएको शेखरको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नै फरक पहिचान रहेको छ। उनी आफूलाई सही लागेको विषयलाई स्पष्टसँग राख्ने र भविष्यमा राम्रो जिम्मेवारीको संभावना भएका नेताको रुपमा रहेका छन्।
भगवती चौधरी र विजय गच्छेदार
२०४६ सालपछिका सबै चुनावहरु लगातार जित्दै आएका कांग्रेसका नेता गच्छेदार र एमाले नेतृ चौधरीबीचको प्रतिस्पर्धाको कारण यो क्षेत्र मानिसको चासोमा परेको छ । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा चौधरीबाट कडा टक्करको कारण गच्छेदारलाई जीतका लागि निकै संघर्ष गर्न परेको थियो। गच्छेदार करिब तीन सय मतले मात्रै चुनाव जितेका थिए। पहिलो संविधानसभामा चौधरी समानुपातिकबाट सभासद बनेकी थिइन्।
२०६२–०६३ पछि कांग्रेस छाडेर मधेशवादी दलको राजनीतिक शुरु गरेका गच्छेदारले प्रतिनिधिसभा चुनावको मुखमा आफ्नो नेतृत्व गरेका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई कांग्रेसमा विलय गराएका छन्। चौधरी गैरसरकारी संस्थामार्फत त्यस क्षेत्रमा सक्रिय रहेको र महिलामाझ लोकप्रिय रहेको कारण चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै पेचिलो हुने अनुमान गरिएको छ।
उमेश यादव र उपेन्द्र यादव
नेपाली कांग्रेसले उपेन्द्र यादवलाई सहयोग गर्न आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपनि सप्तरीमा उनका लागि सुरक्षित रहेन । चुनावी तालमेल गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टीका सह महामन्त्री यादव स्वतन्त्र रुपमा उठेपछि प्रतिस्पर्धा पेचिलो बनेको छ । यसअघि मोरङ र सुनसरीबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका उपेन्द्र सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै सप्तरी आएका हुन। सो क्षेत्रमा उपेन्द्र र उमेशबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ।
अजयशंकर नायक र राजकिशोर यादव
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री अजयशंकर नायक र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलबीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ। दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित भएकाले सो क्षेत्रमा आफ्नो जीत हुनेमा नायक ढुक्क देखिन्छन् । यादव यसपटक पहाडी र मधेशी दुवै समुदायका भोट प्राप्त गरेर आफू जित्नेमा दावी गर्दै आएको छ।
राजेन्द्र महतो र बिमलेन्द्र निधि
यसपटकको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी आकर्षित गरेको छ। यस पटकमा नेपाली कांग्रेसका मधेशका चेहेरा बिमलेन्द्र निधि र राजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोबीचको प्रतिस्पर्धाको कारण चर्चामा रहेको छ। दुवै नेता एक अर्कोलाई कमजोर बनाउन अनेकौ हथकण्डा अपनाएका छन्। महतो सर्लाहीबाट चुनाव लड्न जनकपुर पुगेका हुने भने निधिले त्यसैक्षेत्रबाट संविधानसभा चुनावमा जीत हासिल गरेका थिए।
पुष्पकमल दाहाल र विक्रम पाण्डे
नेकप माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गृह जिल्ला चितवनबाटै चुनाव लड्ने भएपछि यो क्षेत्र चर्चामा रहेको छ। दाहालको प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिका महामन्त्री समेत रहेका बन तथा भूसंरक्षण मन्त्री विक्रम पाण्डेसँग रहेको छ। पाण्डेलाई नेपाली कांग्रेससँग समर्थन रहेको छ। दोस्रो संविधानसभा चुनावमा चितवन ५ बाट विजयी भएका पाण्डे नयाँ क्षेत्र बाँडफाँट हुँदा चितवन-३ मा परेको छ।
रविन्द्र मिश्र, प्रकाशमान सिंह, अनिल शर्मा
वैकल्पिक राजनीति र इमान्दारिताको राजनीतिकको नारा साथका साथ विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट सह अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र कांग्रेसका पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंहबीचको प्रतिस्पर्धाको कारण चर्चामा रहेको छ। बिबिसी नेपाली सेवाको प्रमुखको जागिर छाडेर आएका मिश्रलाई गत बैशाखमा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा विवेकशील र साझा पार्टीले काठमाडौं महानगरपालिकामा प्राप्त गरेको मतले उत्साहित बनाएको छ। स्थानीय चुनाव लगत्तै विवेकशील र साझा पार्टी एकीरकण भयो। नेपाली कांग्रेसका लागि सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र मानिएको काठमाडौं-१ बाट दुई वटा संविधानसभाको चुनाव जितेका सिंहमाथि केही नगरेको आरोप छ।
बामपन्थी गठबन्धनबाट माओवादीका पूर्व विद्यार्थी नेता अनिल शर्मा प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। स्थानीय तहमा एमाले र माओवादीले प्राप्त गरेको मत मात्रै जोगाउन सके भने पनि शर्मा प्रतिस्पर्धामा अघि हुने छन्।
राजन भट्टराई र गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा र एमालेका केन्द्रिय सदस्य राजन भट्टराई प्रतिस्पर्धामा भएको कारण देश तथा विदेशम यो क्षेत्रको परिणाम प्रति चासो रहेको छ। स्थानीय चुनावमा प्रतिकुल परिणाम र एक टेस्टेड भएको कारण दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भन्दा बढी चुनौतीको सामना थापाले गर्नुपर्ने देखिन्छ।
ईश्वर पोरखेल र प्रकाशशरण महत
लगातार दुई पटक संविधानसभा चुनाव हारेर पनि निर्वाचन क्षेत्र नछाडेको कारण एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य प्रकाशशरण महतबीचको प्रतिस्पर्धालाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्। पोखरेललाई दुई पटक पराजित गर्दै कांग्रेस नेता नरहरी आचार्य अस्वस्थ्यताको कारण चुनावी प्रतिस्पर्धामा छैन भने दुई पटक समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभामा सभासद बनेका महतको पार्टीभित्रबाट आलोचना शुरु भएपछि प्रत्यक्षमा चुनाव लडेका हुन्।
महेश बस्नेत र दमननाथ ढुंगाना
करिब साढे दुई दशकदेखि सक्रिय राजनीतिबाट पर रहेका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको चुनाव उढ्ने सप्राइज निर्णयपछि भक्तपुर २ राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहेको छ। गत स्थानीय चुनावमा चार मध्ये तीन स्थानीय तह जितेको एमालेलेका लागि पछिल्लो समयमा देशको विभिन्न घटनाक्रममा ढुंगानाले व्यक्त गरेको विवादास्पद अभिव्यक्तिहरुले उनको प्रतिस्पर्धी बस्नेतलाई चुनावी अनुकुलता थप्ने अनुमान गरिएको छ।
घनश्याम भुसाल र दीपक बोहोरा
एमालेका वौद्धिक नेताको रुपमा चिनिएका घनश्याम भुसाल र चुनावी परिणामलाई पैसा तथा शक्तिको प्रयोगबाट आफ्नो पक्षमा ल्याउन माहिर मानिने मन्त्री दीपक बोहोराबीचको प्रतिस्पर्धालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। भैरहवासहित क्षेत्रका रहेका यस निर्वाचन क्षेत्रमा दुवैबीच पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहँदै आएको छ।
चन्द्रदेव खनाल बलदेव र दीपककुमार उपाध्याप
प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्नका लागि भारतका लागि नेपाली राजदूतको पद छाडेर आएका दीपकुमार उपाध्याय र नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेता चन्द्रदेव खनाल बलदेव बीचको प्रतिस्पर्धाको कारण कपिलबस्तु – १ चर्चामा रहेको छ। दोस्रो संविधानसभा चुनावमा दुवै नेता सोही क्षेत्रबाट पराजित भएका थिए। नेकपा एमालेले जितेको सो क्षेत्रमा उपाध्याय दोस्रो र बलदेव तेस्रो थिए। बलदेवलाई एमालेको साथ रहेको छ। उपाध्यायसँग संसदीय व्यवस्थाको लामो अनुभव छ भने बलदेव सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माओवादी जनमुक्ति सेनाका सह कमाण्डर रहेका थिए। पछिल्लो समयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बलदेव प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भएका थिए।
प्रदीप ज्ञवाली र चन्द्र भण्डारी
नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली र कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीबीच प्रतिस्पर्धाको कारण गुल्मी १ चर्चामा रहेको छ। पटक पटक प्रतिस्पर्धा गरेका भण्डारी र ज्ञवालीको चुनावी परिणाम भने एकनासको छैन । पहिलो संविधानसभा चुनावमा गुल्मी २ बाट ज्ञवालीले भण्डारीलाई पराजित गरेका थिए भने दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भण्डारीले त्यसको बदला लिए। गुल्मी तीन निर्वाचनक्षेत्रबाट खुम्चिएर दुई वटा भएपछि दुवै नेता गुल्मी १ बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्।